Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Abdelbasit Alhaj Alhassan Haj Hamad
Janaayo 1deeda , 2008, John Granville oo ah Muwaadin Mareykan una shaqeeya Hay’adda Horumarrinta Caalamiga ee Mareykanka (USAID) iyo daroowalkiisa Abdelrahman Abbas Rahama oo Sudaani ah, waxaa lagu diley iyaga oo gurigooda u socda kana yimid dabaaldegga Habeenka Sanadka Cusub magaaladda Khartoum, Sudan. Granville oo ah 33 jir, wuxuu ka shaqeynaayay barnaamijyada dimoqraadiyadda iyo Maamulka ee Sudaan. Abbas, oo ah 39 jir, wuxuu USAID ku biirey sanadka 2004 bacdamaa uu xubin ka ahaa Kooxda Jawaab-celinta Gargaarka Masiibooyinka ee Darfur. Laba kooxood ayaa si gooni ah u sheegtey mas’uuliyaddii weerarka: Ansar al-Tawhid (Taageerayaasha Supporters of Monotheism) and al-Qaida in the Lands of the Two Niles (AQTN).
Nidaamka sharciga ee Sudaan shan nin ayuu maxkamad ku qaadey oo lagu helo dambi ah in ay lug ku la’haayeen dilalka. Abdelraouf Abu Zaid Mohamed Hamza, Mohamed Makawi Ibrahim Mohamed, Abdelbasit Alhaj Alhassan Haj Hamad, iyo Mohanad Osman Yousif Mohamed waxaa lagu xukumey dilalmis ah, laakiin xabsigii wuu ka baxsaday sanadkiisii koowaad ee xukunkiisa dembiga. Waxaa la soo sheegey in Mohanad uu Maajo 2011 Soomaaliya ku dhintey. Abdelraouf mas’uuliyiinta Sudaan ayaa gacanta ku dhegtey. Makawi iyo Abdelbasit ilaa iyo hadda waa la la’yahay.
Abdelbasit wuxuu ahaa dilaagii labaad ee tuurey. Xabsiga Khobar ee Khartoum ayuu bisha Juun 11, 2010 ka soo baxsaday, oo iminka Soomaaliya ayuu joogaa.
Taariikhda Dhaashada ee la Isticmaalay: 1 Janaayo 1979; 1983
Goobta Dhalashada: Suudaan
Indhaha: Maariin Madow
Luqadaha: Ingiriis, Carabi